Andro: 7 Janoary 2020
Rafitra vaovao momba ny fiantsoana findramam-piaramanidina finday vaovao EnTaksi İzmir
Vanim-potoana vaovao amin'ny fitaterana taxi-be nanomboka tamin'ny İzmir. Ny rafitry ny fiantsoan'ny fiarakaretsaka finday vaovao "EnTaksi İzmir girdi dia nampidirina androany. Mifindra ho lasa tanàna manan-tsaina i İzmir dia nanao dingana vaovao tamin'ny fitaterana olona tsirairay. [More ...]
Tantara faha-147 taonan'ny lalamby Baghdad! Ny Profesora Edward Mead Earle dia nanoratra ao amin'ny bokiny ”1923 Ab fa i Abdulhamid II dia nanakana ny vahiny tsy hipetraka eny an-dàlana. Araka ny Profesora Earle, II. Abdulhamit, ho fankatoavana ny zo sasany ary [More ...]
Sivas Logistics Center sy Fifandraisana amin'ny lalamby (I Stage) Vokatra asa fananganana Tiv Sivas Logistics Center miaraka amin'ny vidiny 2018/309847 GCC laharana 202.512.838,58 TL [More ...]
Ny TCDD dia hanakarama Inspecteurs Mpanampy; 4 Mpanara-maso Mpanampy dia raisina ho voatendry ho birao mpanolo-tsaina ao amin'ny TCDD General Director. Ny fanazavana ny fidirana dia hazavaina etsy ambany. Daty sy ora fanadinana: Nosoratana [More ...]
Faha-pahalalana momba ny làlam-pandrefesana ho an'ny fivezivezena an-tanàn-dehibe Antalya: Mandehandeha kokoa ny fifamoivoizana ary mampanan-karena kokoa miaraka amin'ireo lalan-tsaina manan-tsaina. Ny kaominina Antalya Metropolitan dia iray amin'ireo teboka mibaiko be indrindra mba hanamaivanana ny fivezivezena an-drenivohitra. [More ...]
Ny EGİAD Trade Bridge dia manohy modely ho an'ny tontolon'ny orinasa. EGİAD - mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Tanora Mpandraharaha Aegean, izay iray amin'ireo antenaina indrindra amin'ny orinasam-barotra amin'ny orinasam-barotra (tambajotra) noforonina mba hananganana sy hanitarana [More ...]
CHP Tanal nanontany hoe: Namidin-dry zareo baoty taloha ve ny manala?
Ny firafitry ny CHP Istanbul Mahmut Tanal, TCDD'de "varotra mpivarotra tsy ara-dalàna" no nitondra ny fandaharam-potoanan'ny fivoriambe. Tanal, Minisitry ny fitaterana Mehmet Cahit Turhan'dan "Voaendaka ao anaty sisiny ny sarety vaovao?" Nanontany ny valiny. [More ...]
Pamukkale fotsy izay narahin'ny paradisa fotsy faharoa tao an-tanàna, ny Centro Ski Denizli, nandroaka ireo mpitsidika tamin'ny faran'ny herinandro teo. Denizli Ski Center, izay ankafizin'ny mpitia ski sy malaza indrindra amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny ririnina. [More ...]
Inona no zava-misy farany amin'ny tetik'asa Metro Gebze?
Dr. Tahir Büyükakın, Ben'ny tanàna ao amin'ny Distrikan'i Marmara sy Kocaeli Metropolitan Municipality; Yalçın Eyigün sy ny delegasiona no niresaka momba ny sata farany an'ny Gebze Metro. Gebze Darıca [More ...]
Idea Marathon ho an'i Izmir falifaly kokoa
Munzmir Metropolitan Municipality sy Open Innovation Association dia manomana marathon idea antsoina hoe 11 Hack12Mobility İdeathon İzmir ta tamin'ny 4-10 Janoary. Ny fe-potoana fampiharana ny XNUMX Janoary. Izmir Metropolitan kaominina misimisy kokoa [More ...]
Tantara momba ny Nostalgic Tram any Rosted any Düzce
Ny tetik'asa trondro nostalgrafika ao amin'ny Sakarya Metropolitan ao Sakarya dia nitondra ny fandaharam-potoana ilay tram-by nostalgic izay nesorina taorian'ny famelana azy nandritra ny 2 taona tao Düzce mpifanila trano aminy. Inona izany fantsona mampidi-doza izany? Medyabar dia napetraka tao anaty talantalana 2 taona tao Düzce [More ...]
Ny governemanta Tajikistan sy Afghanistan any Dushanbe Celoleddin Balhi (Kolhozobod) -Cayhun-Nizhny Pyanc-Sherhan Bandar (Afghanistan) dia nanao sonia fifanarahana ho an'ny fananganana ny lalamby. Tamin'ny fanambarana avy amin'ny ivon-gazety ho an'ny Ministeran'ny Fitaterana any Tajikistan, [More ...]
Iray amin'ireo dingana efatra amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul, izay am-perinasa, no handoa vola noho ny fiantohana amin'ny mpandeha amin'ny sehatra tsy nisokatra. SözcüRaha ny filazan'i Basak Kaya dia ny Depiote Haydar CHP Kocaeli [More ...]